Madaxwayne Siilaanyo Oo Fariin U Diray Ubaxa Dhalinyarada Wadanka Lana Dar Daarmay
Wednesday October 11, 2017 - 12:06:30 in Wararka by xasme axmed ismaciil
Hargeysa (HN)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa da’yarta Somaliland gaar ahaan ardayda jaamcadaha ka qalin jabisay uga digay in ay ku milmaan dhaqamada xun-xun ee aafeeya ilbaxnimadda iyo horumarka bulshada, sida qabyaaladda tahriibka iyo dal-nacaybka.
Madaxweynaha ayaa ugu horayn waxa uu hambalyo u diray ardayda qalin jebisay iyo macalimiinta jaamacadda Admas qaybteeda Hargaysa, waxaanu tilmaamay in jaamacadda Admas ay kaalin weyn kaga jirto kobcinta aqoonta dalka; "Waxaan si weyn u bogaadinayaa maamulka, madaxda iyo macalimiinta Jaamacadda Admas, dedaalka iyo horumarka ay ku tallaabsadeen muddadii ay Jaamacaddu jirtay. Jaamacadda Admas waxay kaalin muq leh ka qaadatay, tayeynta iyo casriyeynta waxbarashada dalka, isla markaana waxay ku guulaysatay horumar weyn, muddadii ay jirtay,” ayuu yidhi madaxweynaha Somaliland.
Waxa kaloo uu intaas ku daray; "Waxa xusid mudan, in Ardayda Jamhuuriyadda Somaliland, meel kastoo ay joogaan in ay waxbarashada ku wanaagsan yihiin, iyadoo ay jiraan arday reer Somaliland ah oo guulo waa weyn ka soo hooyay Jaamacaddo ku kala yaalla dalalka dibadda. Sidaa darteed, waxaan idinkula dar-daarmayaa in ay-daan ka daalin waxbarashada, oo aad sii wadaan hal-ganka iyo dedaalka aqoon raadinta, si aad u gaadhaan heer aad u sarreeya.”
Madaxweynaha Somaliland wuxuu ugu dambayn uu erayo guubaabo ah u diray guud ahaanba da’yarta Somaliland, waxaannu yidhi; "Guntii iyo geba-gebadii, waxaan idinku guubaabinayaa, in aad ka fogaataan dhaqamada xun ee aafeeya il-baxnimada iyo horumarka bulshoooyinka caafimaadka qaba, sida kala-qaybsanaanta, qabyaaladda, tahriibta, dal nacaybka iyo balwadaha.”